Miaro ny zon’ny mpanao gazety Okrainiana ny fitsarana Eoropeana amin’ny tsiambaratelon’ny angodrakitry ny findainy tsy hidiran’ny fanjakana · Global Voices teny Malagasy
Ho didy fakan-tahaka ho an'ny ECHR ny didim-pitsarana
Voadika ny 22 Avrily 2021 4:57 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Français, عربي, українська, Español, Português, English
Natalia Sedletska manolotra ny Schemes, fandaharana fanadihadiana amin'ny fahitalavitra novokarin'ny Sampan-draharaha Okrainiana RFE/RL sy ny Fahitalavi-panjakana Okrainiana. Sary natolotry ny RFE/RL Pressroom.
Nanome rariny ny mpanao gazety mpanao fanadihadiana Okrainiana izay niady mba hiarovana ny angondrakitry ny findainy manoloana ny manampahefanan'ny governemanta sy ny mpitandro ny filaminana ny Fitsarana Eoropeana misahana ny Zon'olombelona.
Niady nandritra ny telo taona mba hiarovana ireo lahatahiriny ao anaty findainy mba tsy ho azon'ny mpampanoa lalàna Okrainiana, izay manadihady ny fivoahan'ny tsiambaratelom-panjakana niseho efa ho efa-taona lasa izay i Natalia Sedletska, mpanao gazety mpanao fanadihadiana miaraka amin'ny Sampan-draharaha Okrainiana RFE/RL misahana ny fandaharana fanadihadiana amin'ny fahitalavitra Paika (Schemes): Kolikoly amin'ny antsipirihany (Схеми: Корупція в деталях).
Nofehezin'ny ECHR fa tokony arovana amin'ny fidiran'ny governemanta ny angon-drakitr'i Sedletska araka ny lalàna Andininy faha 10 ao amin'ny Fifanarahana ho Fiarovana ny Zon’olombelona sy ny Fahafahana Fototra. Nasongadiny ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ireo loharanom-baovaon'ny mpanao gazety mba ahafahan'ny asa fanaovan-gazety miasa malalaka:
Tsy resy lahatra ny fitsarana fa ny fanomezana alalana avy amin'ny fitsarana anatiny hiditra amin'ny angondrakitra dia hamarinin'ny ”fitakiana ambony ho amin'ny tombontsoam-bahoaka’, ary avy amin'izany, ilaina amin'ny fiarahamonina demokratika.
Manamafy ny fandrarana voalohany tamin'ny volana Oktobra 2018 momba ny fidiran'ny governemanta amin'ny angondrakitr'i Sedletska ny didim-pitsaran'ny ECHR tamin'ny 1 Aprily, taorian'ny namoahan'ny fitsarana Okrainiana didy fa manan-jo hiditra sy hijery ny angondrakitra ao amin'ny findainy ao anatin'ny 17 volana ny mpanao fanadihadiana. Ny didy dia nivoaka avy amin'ny fanadihadiana heloka bevava teo aloha amin'ny lazaina ho fivoahan'ny tsiambaratelom-panjakana tamin'ny mpanao gazety tamin'ny taona 2017 avy amin'i Artem Sytnyk, talen'ny Birao Nasionaly Miady amin'ny Kolikoly any Okraina. Nandritra io fotoana io, nitatitra momba ny fanadihadiana maro nahitana tompon'andraikitra ambony Okrainiana ny Paika (Schemes), ao anatin'izany ny Lehiben'ny Fampanoavana Yury Lutsenko.
Nankasitraka ny fanapaha-kevitry ny ECHR ny mpampiasa an'i Sedletska, Radio Free Europe/Radio Liberty, tamin'ny filazany fa manome fiarovana ilaina amin'ny “tsiambaratelon'ny seraseran'ny asa fanaovan-gazety ary mametraka ny fetran'ny fahefan'ny mpanatanteraka” izy ireo.
(1/3) 👏 @RFERL applauds ECHR ruling on @RadioSvoboda @cxemu editor-in-chief Natalia Sedletska’s petition against efforts in 2018 by Ukraine’s Office of the Prosecutor General to get broad, unwarranted access to data on her cellphone. #PressFreedom https://t.co/Ki7K60dVBG
(1/3) 👏 mankasitraka ny didin'ny ECHR ny @RFERL momba ny fangatahan'ny lehiben'ny tonian-dahatsoratra @RadioSvoboda @cxemu Natalia Sedletska manohitra ny ezaka tamin'ny taona 2018 nataon'ny Biraon'ny Fampanoavana ao Okraina mba hahazoany miditra malalaka, tsy voamarina amin'ny angondrakitry ny findainy.
Nilaza ny manam-pahaizana avy amin'ny Ivontoeram-paritra Fampandrosoana ny Gazety, fikambanana mpiaro ny zon'ny fampitam-baovao Okrainiana, fa “ho ohatra iray tsy ho an'i Okraina ihany, fa ho an'ny fomba fiasan'ny ECHR amin'ny ankapobeny” ny fanapahan-kevitry ny ECHR hiaro ny tsiambaratelon'i Sedletska ary ho sarobidy ho an'ireo mpanao gazety hafa izay mety hidiran-doza ny loharanom-baovaony sy ny lahatahiriny izany.
Mpanao gazety ela nihetezana i Sedletska izay niara-nanoratra fanadihadiana marobe momba ny kolikoly politika avo lenta sy ny fanararaotan'ny biraom-panjakana any Okraina sy ny tetikady famotsiam-bola iraisampirenena ihany koa. Vao haingana izy no namokatra sy nampiantrano ny Schemes, famokarana iraisan'ny Sampan-draharaha Okrainiana RFE/RL sy ny Fahitalavi-panjakana Okrainiana. Nandray anjara tamin'ny tetikasa toa ny YanukovychLeaks sy ny From Russia with Cash ihany koa izy, fandaharana fanadihadiana ao amin'ny Fantsona fahefatra [Channel 4] ao amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK) momba ny famotsiam-bola avy any Rosia sy any an-kafa amin'ny alàlan'ny tsenam-barotra avo lenta any Londra.
Selfie nalaina nandritra ny fakana sary miafina tao amin'ny trano mihaja any London ho an'ny horonantsary Channel4